Egwu YouTube na-enye gị ohere ịmegharị egwu mgbe ejikọtara ya na ndị ọkà okwu | Gam akporosis
Kemgbe Google bidoro YouTube Music, ọtụtụ ndị ọrụ amatabeghị etu, n'adịghị ka Google Play Music, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ pere mpe, dị oke oke ọbụna maka ọrụ ndị dị otu ahụ dị ka ekwe omume nke ikwugharị songs mgbe anyị na-ejikọrọ na a smart ọkà okwu.
Enweela ọtụtụ asịrị na izu ndị na-adịbeghị anya na Google na-arụ ọrụ na a ọhụrụ ihuenyo imewe Ugbu a ọ na-ada. Designdị ọhụrụ ahụ amalitela ịmalite ma gosipụta shuffle ma megharịa bọtịnụ mgbe anyị zipụrụ ụda na ndị ọkà okwu ejikọtara.
Igodo ohuru ndị a amalitela ịgbanye ihe nkesa, yabụ ọ bụrụ na ha apụtaghị na ngwa egwu YouTube ọ ga-abụ oge tupu ha abata. You nwere ike ịnwa ịmanye ya ka ọ pụta site na imechi ngwa ahụ na imeghe ya.
Ọtụtụ adịghị ike
Ọ dịghị onye nwere ike ịkọwa otú mgbanwe si Google Play Music na YouTube Music ha na-adị otú ahụ na-egbu mgbu maka ndị ọrụ gị. Ọ dịghị onye na-akọwa otú ọ ga-esi kwe omume na ọtụtụ ọrụ ndị dị na Play Music abụghị ụmụ amaala na mwepụta nke YouTube Music.
Ihe kachasị mfe ga-abụrịrị wuo ngwa ọ bụla na Play Music ha nwere ruo oge onye nọchiri ya ga-abịa. Mana o yiri ka Google chọrọ ichegharị ngwa ahụ site na ncha ma gbakwunye ọrụ dị ka ndị ọrụ chọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwu YouTube na-enye ohere ịmegharị egwu mgbe ejikọtara ya na ndị ọkà okwu